निषेधाज्ञामा कस कसले सवारी चलाउन पाउने र नपाउने? - Hamro Janakpur
निषेधाज्ञामा कस कसले सवारी चलाउन पाउने र नपाउने?
२०७८ बैशाख १६, बिहीबार ०६:१५
काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञामा चल्न पाउने र नपाउने सवारी साधनको वर्गीकरण गरेको छ। तीन वटा जिल्ला प्रशासनले गत बिहीबारदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन सवारी साधनको वर्गीकरण गरेको हो।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमकुमार भट्टराईले निषेधाज्ञालाई पूर्ण पालना गर्न तथा निषेधाज्ञा अवधिभर घर बाहिर जान परेमा सवारी पास लिएर र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी घरबाट निस्कन सकिने बताए।